Contact Us - ULA
King Gottwald Peter ID's August 19, 2019 at 6:50 AM
Message for All Myanmar Military and Political Movement's of Democracy
Great Day Dear Excellent Leader's, I King Gottwald Peter ID's invite All Your Excellence for new progress of Your Community and Development new Legal Governmental Regime byaProcess of New Territorial Zone of COoperation under process of Federalization.
Please accept my document in PDF save on Google Drive, and verifiedamessage in public Data Communication on website of ID's Authority.
Official Communication Register in Database (19.08.2019):
ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် အမှတ် ( ၁၃ / ၂၀၁၉ )
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ(၃၀)ရက်နေ့အထိ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့်ရက္ခိုင့်တပ်တော်တို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သော မိနစ်(၃၀)အထက် နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲများ အကြိမ်အရေတွက်ပြဇယား ၊ REC ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလ(၂၁)ရက်နေ့ထိ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စာရင်းနှင့်၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့မှ ဧပြီလ(၁၃)ရက်နေ့အထိ မြန်မာစစ်တပ်မှ စစ်ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သည့်စာရင်း
Welcome to the blogpage of the United League of Arakan
Welcome to the blog page of the United League of Arakan!
United League of Arakan | Arakan Army & | Free Arakan By The Way of Rakhita